Vahaolana amin'ny tsy fetezana tsy misy maso sy tsy misy sakafom-biby China Manufacturer
Description:Vahaolana amin'ny tsy fahampian-tsakafo ho an'ny fiarovana mafy,Solon'ny fikolokoloana tsy misy fotony,Solon-tsakafo tsy misy maso sy tsy misy ala
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny fiarovana mafy > Vahaolana amin&#39;ny tsy fetezana tsy misy maso sy tsy misy sakafom-biby
Vahaolana tsy manam-paharoa sy tsy misy fofona ho an'ny raki-doko mafy
ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, semiconductor, LCD ary haba mafy sns., ary azo ampiasaina koa mba handotoana sy handotoana, fanodikodinam-peo elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra marina, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana marina,
Ny toetra mampiavaka ny Spray Nano:
High Performance Coatings fiarovana ara-teknika:
Fampiasana ranon-tsakafo Nano
Vahaolana amin'ny tsy fahampian-tsakafo ho an'ny fiarovana mafy Solon'ny fikolokoloana tsy misy fotony Solon-tsakafo tsy misy maso sy tsy misy ala